Qasaare ka dhashey Xarun Caruurta lagu xanaaneeyo oo la duqeeyey - Awdinle Online
Qasaare ka dhashey Xarun Caruurta lagu xanaaneeyo oo la duqeeyey
Wararka ka imaanaya Degmada saakow ayaa sheegaya in duqeymo ka dhacey halkaasi ay waxyeelo ba’an kasoo gaartey caruur iyo dad shacab ah.
Duqeynta oo dhacdey gelinkii danbe ee xaley ayaa lagu soo waramayaa in lala beegsadey goob lagu xanaaneeyo caruurta oo kutaala degmada Saakow.
dhimashada ayaa las heegey in kor ud haaftey ilaa 80 ruux halka dhaawacna aan weli la heynin tiro dhab ah sida dadka deegaanka aya sheegayaan.
caruur badan ayaa ugeeriyootey dhaawac soo gaarey kadib markii ay waayeen gurmad caafimaad sida uu sheegey mid kamid dadka deegaanka.
Goobta Duqeyntu ka dhacdey ayaa lasheegey in lagu xanaaneyn jirey curuurta agoonta ah ee da’dooda udhaxeysa 5 ilaa 12 jir waxaana qeyb kamid ah xarunta cunto loogu karin jirey dadka da`da ah.
goobjoogayaal kusugan degmada saakow oo aan xiriir la sameyney ayaa sheegaya in xarunta caafimaadka ee degmada lagu dabiibayo dhaawacyadii waxyeelada kasoo gaartey duqeynta lala beegsadey xaruuntaasi waxeyna intaa ku dareen in Daawada ay gabaabsi tahay.
saraakiil katirsan laamaha amaanka oo magacooda qariyey ayaa sheegey in Co. Cabdalla uu amrey in laduqeeyo goobahan ayagoo sheegey in markasta uu Fuliyo Howl galo lagu waxyeeleynayo dadka shacabka ah.
Col. Cabdallah, Teliyaha Dabagalka ayaa ku dooda in shacabka laduqeeyo ay fududeyneyso in ay kacaan oo ladagaalamaan kooxda Alshabaab sida aan kasoo xiganey saraakiil ku dhow dhow masuulkan.
Sargaalkan ayaa lasheegey in MD Farmaajo u sheegey in xaley lalaayey Alshabaabkii ugu badnaa ayadoo warbaahinta qaar ay warkaas qortey halka saaka ay waalidiin badan dhoobanyihiin xaruunta caafimaadka degmada ee lagula tacaalayo caruurtii waxyeelada kasoo gaartey.
sargaalkan oo loogu yeero (Feylka Madow ee Farmaajo) ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo kadhan ah xuquuqul insaanka waxaana loo heestaa kutagrifal awoodeed iyo beegsi dad shacab ah.
Warar hoose ayaa sheegaya in kiisaskan soo noqnoqdey lahor geeyey golaha amaanka ee QM si loo baaro isla markaana maxkamad loo horkeeno saraakiisha sameeya xad gudubyada xilayada uu socodo howlgal lagu baacsado kooxda argagixsada ee Alshabaab.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo walwal iyo walaac muujiyay
Next articleDowladda oo u jawaabtay untland & Jubbaland kuna adkeysaneysa….